Cultures » ဘာကိုစားမလဲ Eat What?	21
လူတွေကိုတော့ အစုံစားသတ္တ၀ါလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့အတွက် အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ ဆိုသလို…….. =အသက်အရွယ်အလျှောက်၊
ပြောရင်းနဲ့ ဘေးချော်ကုန်ပြီ။ အခုနောက်ပိုင်း ကြားသိရသလောက် ကျန်းမာရေးအတွက် နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို မစားသုံးသင့်ဘူးလို့ ဆိုပြန်သလို၊
လျှာတစ်ဖျားကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ စားချင်တာကို စားသောက်မိတယ်ဆိုတာ မငြင်းလောက်ကြဘူးထင်ပါရဲ့။ ဦးကျောက်ပြောတဲ့ စားရမှာတွေကတော့………..
ကဲ…….. စာရှု့သူသင်ရော ဘာကိုစားမလဲ။ About Ma Ma
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငယ်တုန်းက ကျောင်းကျန်းမာရေးသင်တုန်းကတော့…
၃) ညာဏ်ရည်ဖွင့်ဖြိုးစေသော အစာများးး ဘာချက်ချက် အဲဒီ ထဲက ပါအောင် ချက်ရမယ်ဆိုလို့ အိမ်ကို ထမင်းထုတ်ခိုင်းတိုင်း ဟင်းစပ်ပေးရာက အစားဝါသနာပါသွားတော့တာပါပဲ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ရွာသူ မယ်ဗိုက် ချစ်သုခသည်တွေအတွက် ရေးနေတဲ့ပို့စ်ထဲက ထုတ်နှုတ်ပါရစေ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီပို့(စ) ရေးပြီးမှ ဖတ်ပြီးမှ ကလေးမွေးတော့မယ်ညော်
ဦးကျောက်ခဲ says: ဂယ်လား… ဂယ်ဂျီးလား…
တထိုင်ထဲနဲ့ အချောသတ်ရေးလိုက်မှာနော်… ဟွမ့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ယူအက်စ်မှာဆို.Gestational Diabetes က. မိခင်လောင်းတိုင်းလိုလို စစ်ရင်ရှိတယ်ထင်တာပဲ..
သူတို့ဖြည့်ခိုင်းထားတဲ့.. ဖေါင်ကို.. အကုန်.. ကောင်းတာတွေဖြည့်.. ပြန်ပေးလိုက်တော့.. ပြီးသွားရော..။ (ရွာ့ဆရာဝန် အမတော်ပဒုမ္မာ အဲဒီ.. မိခင်လောင်းဒိုင်ယာဘီးတီးအကြောင်း ပြောပြနိုင်မယ်ထင်တာပဲ..)
ဇီဇီခင်ဇော် says: အားနေလို့ ဆက်ပွါးရရင်၊
တောင်ပေါ်သား says: ( နှစ်ပေါင်း ၇၀ကျော် ဘီယာ သုံး ပုလင်း နဲ့ ဝီစကီ တစ်ပက်ကို နေ့စဉ် သောက်သုံးခဲ့တဲ့ အသက် ၁၁၀ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး
အသက်ရှည်စေတဲ့အထဲမှာ အဲဒါမျိုးတွေလည်း ပါသလား မသိ ၊ ကျနော်တို့ကတော့ အဆင်ပြေရာ စားမိတာပါပဲ ၊
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မြန်မာပြည်မှာ လာနေပြီး လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားကြည့်ရင် စားစရာ သိပ်မရှိဘူး။ ခြံဝယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်စိုက်စား ရမယ့်ပုံ။
မြစပဲရိုး says: အသီးအနှံ တွေ ငါး တွေ ပေါမှပေါ ပါ ပြုံး ရယ်။
မြစပဲရိုး says: You are what you eat တဲ့။ တကယ်တော့ ပြောသာပြောတာ။
ပစ် ရမှာလဲ နှမြော။ စားလိုက်တယ်။ စားပြီး တော့လဲ သိတယ်။ ပါးစပ်ထဲ မှာ MSG အရသာ တစ်ထွေးကြီး။
kai says: U Phey Seyn ဖေ့ဘုတ်မှ…
Mike says: .မြန်မာပြည်မှာကြောက်တတ်ရင် ဘာမှတောင်စားဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျ
manawphyulay says: အစားအသောက်ကတော့ မနောတစ်ယောက်တော့ဖြင့် အစုံစားထဲမှာ မပါဝင်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစားအသောက်ကြေးများတာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ၀က်သားအမဲသား မစားရတာနဲ့ ဟိုဟာဆိုလည်း မကြိုက် ဒီဟာဆိုလည်း မကြိုက်နဲ့ကို ဘာမှမစားဖြစ်တာပါပဲ။ ခုတောင် ပေါင်ချိန်ကျနေလို့ စိတ်ညစ်နေလေရဲ့…
kai says: ဗိုက်ကပူနေတုံးမဟုတ်လား..
Alinsett @ Maung Thura says: အနော်ကတော့ အခုစားချင်လာတာကို ရအောင် ရှာကြံစားတဲ့နည်းနဲ့ နေ နေတယ်။
Ma Ma says: အသီးအရွက်ကိုတော့ မြန်မာထမင်းဟင်းမှာ အကြော်အချက်လို တမျိုး၊ အတို့အမြှုပ်လို တမျိုး ထည့်စားတဲ့အကျင့်ရှိတာမို့ အသီးအရွက်အတွက်က အချိုးကျပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်နေလောက်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အတိုက်အခံမကောင်းလို့ (ခွက်ဒစ်တူ မောင်ဂီ) လို့ပဲ အပြစ်တင်ရတော့မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
ဟေသီ says: အမေက ငယ်ငယ်တည်းက အစုံစားအောင် ကျင့်ပေးထားတယ်။ အမဲသားကိုလည်း စားသင့်စားရမယ့် အချိန်မှာ စားကို စားရအောင်လည်း ကျင့်ပေးထားတယ်။ ကိုယ့်ဘာကို ရှောင်ပြီး မစားလို့သာ အမဲသား မစားဘူး ဖြစ်သွားတာ။ အသီးအရွက်တို့ ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ အခြား အစားအစာတွေကတော့ စုံအောင် စားဖြစ်တယ်။ အစုံမစားရင် အမေက မကြိုက်ဘူး။ အရသာကိုလည်း ချိုချဉ်ဖန်စပ်ခါး အကုန်စားခိုင်းတယ်။ အာ့ကြောင့်လည်း လူက ထွားထွားကြီးနဲ့ ဆင်ကိုးစီး စားမကုန်ဖြစ်နေတာနဲ့ တူပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: မဟေသီ စားဖို့ ကြောင်သား ကျွေးဗျဆေ..
ဟေသီ says: အော် လူကို လူရိုင်းမတွေလို အစုံအစုံ စားနေတယ်လို့ ထင်နေတယ်နဲ့ တူပါတယ်……………..
Ma Ma says: ကြောင်သားဆိုရင် လက်နှေးကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
မြည်းမယ့်သူ ရှိလားးးးးး ရွာသူားတွေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သများတော့ စားဝူး။